Photoshop Kodak plugin Filter - MYSTERY ZILLION
Photoshop Kodak plugin Filter
Vote Up0Vote Down Soe Tun Naing November 2008 Posts: 0Registered Users Photoshop ၀ါသနာရှင်များအတွက် Photoshop ကို အသုံးပြုနေသူများအတွက် အသုံး၀င်မယ့် kodak Photoshop Plugin လေးတစ်ခု မျှေ၀ပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူတယ်။ သုံးလို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာပါ။ ဒီ plugin ကတော့ မူရင်း CD နဲ့မှ သုံးလို့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့စက်တွေ user တွေ သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တော် လုပ်ထားပါတယ်။1. C:\_Program Files\_Adobe\_Photoshop CS\_Plug-Ins\_Filters ကို copy ယူပြီး paste ok လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Plugin (4)ခုကို copy ယူပြီး filters ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်ပါ။2. photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံတစ်ပုံကို open လိုက်ပါ။3. Filters ထဲကိုသွားပါ။ အောက်ဆုံးမှာ kodak ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ ပြီးရင် ပထမဆုံးအသုံးပြုသူတွေ အတွက် Register အင်လုပ်ရမှာပါ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အကွက်ကို နှိပ်ပါ။ပြီးရင်တော့ username တွေ password တွေ ကြိုက်တာထည့် ပြီး ok လိုက်ပါ။အသုံးပြုလို့ ရပါပြီဗျာ။ Fine, Medium, Coarse တွေ မိမိစိတ်ကြိုက် ချိန်ယူလို့ရပါတယ်။kodak filter မသုံးမီပုံkodak filter အသုံးပြုပြီးပုံအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ။Filters ဒီနေရာက ရယူပါ။ http://www.mediafire.com/?dtjtyuxuxb1	3 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down Ice_Cream June 2009 Posts: 155Registered Users ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်ကောင်းတာလေးများတွေ့ရင်လဲ ထပ်မျှပါအုံးလို့ .... :)	Vote Up0Vote Down hipper88 January 2010 Posts: 22Registered Users အစ်ကိုရေ ifile ကပြန်တင်ပေးပါလားခင်ဗျာ။	Vote Up0Vote Down Andy January 2010 Posts: 0Registered Users :106:Access Denined ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
January 2010 hipper88
January 2010 Ice_Cream